Ugwu K2: njirimara, nhazi, ahịhịa, fauna na ịrị elu | Network Meteorology
El ugwu K2 Ọ bụ otu n'ime ndị nwere aha ọma dịka ịbụ otu n'ime ndị kachasị elu na nke kachasị dị egwu ịrịgo. Ọ bụkwa na ọ bụ ugwu nke abụọ kachasị elu n’ụwa na otu n’ime ihe kachasị dị egwu. E mere atụmatụ na otu onye n’ime mmadụ anọ ọ bụla na-achọ iru isi na-anwụ. N'ịbụ onye akpọrọ aha ugwu ọhịa dị ka ọ bụ ọnụọgụ ọnwụ nke abụọ kachasị na Annapurna. N’iburu ihe egwu dị na ya, ọdịbebeghi n’elu oyi.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, ọdịdị ala, geology, flora na fauna nke Ugwu K2.
2 K2 guzobere
3 Osisi ala na umu anụmanụ nke K2
Somefọdụ maara ugwu a dị ka Godwin-Austen na Chogori ma ọ bụ Ketu, dabere n’ógbè ahụ. Ebe ọ bụ na ọ nwere nnukwu ọghọm dị egwu, ọtụtụ mmadụ na-atụfu ndụ ha mgbe ha na-achọ ịrịgo ya, anaghị eme ịrịgo n'oge oyi. Aha onye ugwu George Montgomerie bu aha nke ugwu na mbu na 1852. N'oge a, e nwere Nnukwu Ihe Osimiri Na-eme Nnukwu Ihe. Ugwu nile nke Karakorum ka a ga-akpọ aha obodo, mana ụfọdụ ka a mata. Aha ọzọ nke enyerela emeela agadi ma megharia ka oge na-aga.
Ọ bụ ugwu dị na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ nke ugwu Karakoram ma bụrụ akụkụ nke nnukwu ugwu mejupụtara ya iche himalayan. N'ime otu nnukwu Himalayas bụkwa ugwu ahụ Everest. K2 nwere oke oke nke China na Pakistan. Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị elu nke ugwu dị larịị ma nwee akụkụ atọ. Ahụ efe ya adịghị agbanwe agbanwe, na-eme ka ịrịgo siri ike ọbụlagodi ma ọ bụrụ na onye nwe ugwu ahụ nwere ahụmịhe dị mma.
Anyị na-achọta achọta otu kachasị elu nke 8611 mita n'elu oke osimiri. Ugwu ugwu di elu karia akuku ndida. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị nyochaa ọdịdị ala niile n'ozuzu ya, anyị ga-ahụ na ọdịdị ala ya jupụtara na ticos na ihu ya niile, ọ gaghị ahụkwa site n'ọtụtụ obodo. Ulo elu ya na akụkụ ugwu nke nnukwu glaciers na-ekpuchi afọ niile. Igwe glaciers ndị a nwere akwa oyi akwa nke snow nke gbakọbara kemgbe ọtụtụ afọ. Maka akụkụ ya, enwere ike ịhụ ụfọdụ ndagwurugwu glacial na ntọala.
Ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị nso na ugwu ahụ dị oke njọ, ọkachasị n'akụkụ elu. N'ihi ọnọdụ ihu igwe dị n'akụkụ elu nke ugwu ahụ, enwere ihe egwu dị elu na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Agbanyeghị, ihu igwe na K2 bụ ihe a na-ejighị n'aka, yabụ ihe ọghọm nke ihe mberede nwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata ka ị na-arịgo. Ọtụtụ mgbe, ihe ize ndụ a na-abawanye ka anyị na-arị elu ịrị elu.
Uzo a di nso n’ugwu ahu ma site ebe ahu ka inwee ugwu di nma. Nanị ohere ịnweta mpaghara ndị a bụ site na ndagwurugwu Baltoro.
Anyị ga-ahụ etu ọnọdụ si mee ugwu a. Ugwu ugwu Karakorum bụ salad dị na nsọtụ Eurasia. Onu a bu oke efere nke efere tectonic abuo na-agha agha. Ya mere, anyị maara na mmalite na nguzobe nke K2 bụ nsonaazụ nke nkukota n'etiti efere tectonic abụọ: efere ndị Indica na Eurasia. Ọdịdị nke ugwu a na mpaghara ala dị iche iche malitere ịkwaga n'ebe ugwu ihe karịrị afọ 40 gara aga. Mmeghari a nke kọntinent ahụ rụpụtara idi nso nke efere tectonic na nkwekọrịta ha.
Ugwu ahụ nwere ọtụtụ okwute metamorphic. A na-eche na mmepụta nke magma buru ibu na mpaghara okpuru ala ga-eme ka nkume ndị a niile ochie. All ndị a metamorphic nkume malitere agafeghị oke Ugwu K2 n'oge mgbe Miocene.
Osisi ala na umu anụmanụ nke K2
Oburu na anyi arutaghi aka na osisi na anumanu ndi bi na ugwu a, anyi aghaghi ima na ihu igwe, ugwu na ihe isi ike iji rigo ugwu nile na egbochi ya ibu ugwu ebe ndi di ndu na-abawanye nke oma. Ọ bụ naanị ụdị ole na ole na-emegharị n'ọnọdụ ndị a dị oke egwu ọ nwere ike ịdị ndụ na mkpọda ugwu.
Offọdụ n'ime nnụnụ kachasị emegharị ahụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi ndị a na-adịghị mma nke ga-efe n'otu n'ime gburugburu. Banyere osisi, naanị moss, lichens na osisi ndị ọzọ dị ala na-eto eto na n'etiti nkume na-adị ndụ. Ebe dị elu ọ na-eto eto buru ibu mana ọ naghị eru n'akụkụ kachasị elu. Ogwu ahihia adighi ya mgbe anyi ruru ebe di nso na nzuko ya.
Ka oge na-aga, ihe ndị dị ndụ na-emepụta ụfọdụ mgbanwe iji dịrị ndụ n'ọnọdụ ndị dị njọ. Agbanyeghị, oge na-abịa mgbe enweghị ezigbo nri na-esi n'aka ndị isi m butere iji nyere aka guzobe obodo nke ihe ndị dị ndụ. N'ebe di elu nke Ugwu K2 ruru Enweghị ụdị mgbanwe nke okwu ma ọ bụ ume n'etiti ndị dị ndụ dị iche iche. Naanị anyị na-ahụ foduru nke glaciers na nnukwu okwute, yabụ na anyị nwere ike ịsị na gburugburu ebe obibi dị ọtụtụ.
Ugwu a nwere ọtụtụ ụzọ nrịgo. Thezọ nke ịrị elu nke ndị ọrụ gọọmentị nke ghọrọ ihe ama ama bụ Abruzzo na Line Line. A na-eji nke mbụ eji arịgo na nke abụọ, ikekwe, ụzọ kachasị sie ike karịa ugwu ọ bụla dị na mbara ala. Maka ndị chọrọ ịmata ihe, ọ siri ike ịrịgo karịa Ugwu Everest.
Iji nweta otu echiche, rue 2004, ndị ugwu 2.238 arịgoro Everest ebe naanị mmadụ 2 rịgoro K246. N’okporo ụzọ anwansi anwansi n’afọ ahụ, a kpuwere onye nke anọ na nke ikpeazụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Ugwu K2 na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » K2